डिभिजन २ किर्केट: सन्दीपले दिलाए नेपाललाई दास्रो सफलता
काठमाडौँ । अहिले नेपाल र क्यानाडाबीच भैरहेको आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग किर्केटमा नेपाललाई दास्रो सफलता मिलेको छ। नेपालको लागि दास्रो विकेट सन्दिप लामिछानेले लिएका हुन्।
त्यसैगरी नेपाललाई पहिलो ब्रेक थ्रू भने बसन्त रेग्मीले दिलाएका थिए। उनले क्यानडाका बिस्पोटक श्रीलंकाली ब्याट्सम्यान रुभिन्दु गुनासेकेरालाई व्यक्तिगत ९ रनमा रोहितकुमार पौडेलको हातबाट क्याच आउट गराएका हुन्। अहिले क्यानडाले ताजा स्थितिमा १६.३ ओभरको खेल हुँदा २ विकेटको नोक्सानीमा ६५ रन बनाएको छ ।
उसका लागि ओपनर श्रीमन्था व्यिजरआन्तेले ४५ बल खेल्दै ३४ रन बनाएका छन् भने दास्रो नम्बर नम्बर अहिले मैदान प्रवेश गरेका ब्याट्सम्यान नितेश कुमारले ११ बल खेल्दै ५ रन बनाउँदै सन्दिप लामिछानेको बलमा ज्ञानेन्द्र मल्लको हातबाट क्याच आउट हुन पुगे । अहिले तस्रो नम्बरमा ब्याटिंग गर्न आएका धुनका पाथीराना २ रन बनाएर खेलिरहेका छन्।
नेपालले क्यानडाको पहिलो र दास्रो विकेट चट्क्याए पनि ओपनर व्यिजरआन्ते भने नेपालका लागि लगातार खतरा बनिरहेका छन्। उनले लगातार राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा नेपाललाई समस्या पर्न सक्छ।
त्यसैले जतिसक्दो छिटो नेपालले अर्को विकेटको खोजी गर्नु जरुरी देखिएको छ, यतिखेर।
प्रकाशित : बुधबार, फागुन ०२, २०७४१४:२८
पुर्ननिर्माणका लागी भत्काइदै गाेरखा दरबार
तीन राजदूत अनुमोदित ! को कहाँ अनुमोदित भए ? हेर्नुहोस् !
५४ सेकेन्ड अगाडि बिगुल
३८ मिनेट अगाडि PS